Plex.Earth Timeviews disponealos profesionales de AEC las últimas imágenes satelitales dentro de AutoCAD – Geofumadas
Plex.Earth Timeviews သည် AEC ပညာရှင်များအား AutoCAD အတွင်းနောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များကိုပေးသည်
နိုဝင်ဘာ၊ 2019 AutoCAD-AutoDesk, တီထွင်မှု
ဗိသုကာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအရှိန်မြှင့်ရန်အတွက် AutoCAD အတွက်လူကြိုက်အများဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည့်Plex.Earth®၏ developer များဖြစ်သော Plexscape သည် Timeviews ™ကိုကမ္ဘာအနှံ့ AEC ဈေးကွက်တွင်ထူးခြားသော ၀ န်ဆောင်မှုအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ အဆင့်မြှင့်တင်ထားသောဂြိုလ်တုပုံရိပ်များသည်များသောအားဖြင့် AutoCAD တွင်လွယ်ကူစွာရနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များနှင့်အဖိုးတန်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးရန်အတုထောက်လှမ်းရေးကိုပေါင်းစပ်ထားသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော Bird.i နှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်ပူးပေါင်းမှုအရ Plex.Earth Timeviews သည်ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တုကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် Maxar ကိုလက်လှမ်းမီစေသည်။ Technologies / DigitalGlobe, Airbus နှင့် Planet: ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောစျေးနှုန်းပုံစံကိုတင်ပြကြသည်။ AEC ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည်လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ် Plex.Earth ကြေးပေးသွင်းမှုများမှတစ်ဆင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအစီအစဉ်များအတွက် Timeviews ၏အကောင်းဆုံးဂြိုလ်တုအချက်အလက်များကိုယခုချက်ချင်းလက်လှမ်းမီနိုင်သည်။
ယနေ့အချိန်အထိစီးပွားဖြစ်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်၊ သိသိသာသာနှောင့်နှေးခြင်းနှင့်အချက်အလက်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွေ့အကြုံအချို့လိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များသည်အရည်အသွေးညံ့ဖျင်းပြီးမကြာခဏခေတ်နောက်ကျလေ့ရှိပြီးစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဆင်းသက်လာသောအလုပ်များကိုဖန်တီးရန်အမြဲတမ်းလုံလောက်သောခွင့်ပြုချက်မပေးချေ။ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များနှင့်မြေပြင်လေ့လာမှုများမှာစက်ပစ္စည်းများတပ်ဆင်ရန်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အခြားနေရာတွင်တည်ရှိရန်လိုအပ်ပြီးအခြားဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကန့်သတ်ချက်များ (မသင့်လျော်သောရာသီဥတု၊ မောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များမရှိသောလေယာဉ်ဇုန်များ) ။ ။
Plex.Earth Timeviews သည် AutoCAD အတွင်းရှိအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်ဂြိုလ်တုပုံရိပ်များနှင့်မကြာမီအခြား CAD ပလက်ဖောင်းများသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုဒီမိုကရေစီနည်းဖြင့်ရယူခြင်းအားဖြင့်ဤကန့်သတ်ချက်များကိုအဆုံးသတ်စေသည်။ ပရီမီယံဂြိုလ်တုဒေတာများကိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စွာရရှိခြင်းအားဖြင့် AEC ပညာရှင်များသည်သူတို့၏စီမံကိန်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုပိုမိုနားလည်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်နှင့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစမှအကုန်အကျများသောအမှားများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်၎င်းတို့၏ပစ်မှတ်ofရိယာ၏နောက်ဆုံးပေါ်မျက်မြင်သက်သေများရှိသည်။
ထို့အပြင် Timeviews သည်မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုကုမ္ပဏီများအား၎င်းတို့၏လက်ရှိစီမံကိန်းများ (နှင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုများ) ၏တိုးတက်မှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်၊ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှအကျိုးစီးပွားevolရိယာတစ်ခုမည်သို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာသည်သို့မဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်များသို့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၏အမှန်တကယ်သက်ရောက်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ။
Plexscape ၏တည်ထောင်သူနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Lambros Kaliakatsos က“ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကအရပ်ဘက်အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ရမယ့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒါကငါ့ကို AutoCAD နဲ့ Google Earth ကိုတိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုတီထွင်ခဲ့တယ်။ Plex.Earth သည်၎င်း၏စတုတ္ထမျိုးဆက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မှာတူညီနေဆဲဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများအနေဖြင့်အယူအဆရေးဆွဲခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏စီမံကိန်းများ၏ဒီဇိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နေရာတွင်အခြေချရန်လိုအပ်သည်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်။ ငါတို့၏ပရီမီယံဝန်ဆောင်မှုအသစ်ဖြစ်သော Timeviews ™သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနောက်ဆုံးပေါ်ဂြိုဟ်တုပုံရိပ်များနှင့်၎င်းတို့ပေးသောတန်ဖိုးရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်လက်လှမ်းမီစေသောကြောင့်ဤရည်မှန်းချက်ထက်ကျော်လွန်သောခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Plexscape သည်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာများသည်ဗိသုကာပညာ၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများအပေါ်ဒီဇိုင်းနှင့်တကယ့်ကမ္ဘာအကြားကွာဟချက်ကိုဖြည့်ဆည်းစေသောဆန်းသစ်တီထွင်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုတီထွင်ခြင်းဖြင့်အင်ဂျင်နီယာများ၏လုပ်ဆောင်ပုံကိုပြောင်းလဲရန်ကတိက ၀ တ်ပြုသည်။
Plex.Earth, nuestro producto estrella, es el primer software basado en la nube creado en el mercado CAD y una de las herramientas más populares en la tienda de aplicaciones de Autodesk. Nuestra solución, lanzada originalmente en 2009, está siendo utilizada por miles de ingenieros en más de 120 países en todo el mundo, lo que les permite tener una vista geográfica 3D completa de sus sitios de proyectos del mundo real en cuestión de minutos,através de Google Earth, Bing Maps y otros servicios de mapeo. y proveedores líderes de satélites comerciales (Maxar Technologies / DigitalGlobe, Airbus y Planet).
Plex.Earth ခရီးစဉ်၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက www.plexearth.com
ယခင် Post မှ« Previous ၁၅ ကြိမ်မြောက် gvSIG ညီလာခံ - နေ့ ၂
Next Post AulaGEO သည် Geo အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များအတွက်အကောင်းဆုံးသင်တန်းဖြစ်သည်နောက်တစ်ခု»